Safarka Agile Suuqgeynta | Martech Zone
Safarka Agile Suuqgeynta
Axad, Maarso 19, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Muddo toban sano ah oo aan ka caawineyno shirkadaha inay kobciyaan ganacsigooda khadka tooska ah, waxaan adkeynay geeddi-socodka xaqiijinaya guusha. Inta badan maahan, waxaan ogaannaa in shirkaduhu ay la halgamayaan suuqgeynta dijitaalka ah maxaa yeelay waxay isku dayaan inay si toos ah ugu boodaan fulinta halkii ay ka qaadi lahaayeen tallaabooyinka lagama maarmaanka ah.
Isbadalka Suuqgeynta Dijital ah
Isbeddelka suuqgeynta ayaa la mid ah isbeddelka dhijitaalka ah. Daraasad Xog ah oo ka socota PointSource - Fulinta Isbadal Dijital ah - xog laga soo ururiyey 300 go'aan qaadayaasha Suuqgeynta, IT-ga, iyo Hawlgallada ayaa tilmaamaya halganka ay ganacsatadu ku leeyihiin hagaajinta iyada oo maskaxda lagu hayo isticmaalaha ugu dambeeya. Waxay ogaadeen in shirkadaha:
La'aanta yoolalka iyo jihada si cad loo qeexay - kaliya 44% ganacsiyada ayaa sheegaya inay aad ugu kalsoon yihiin awooda ururkooda si ay u gaaraan himiladooda koritaanka halka 4% aysan kalsooni ku qabin haba yaraatee
U halgama inaad mideyso waaya-aragnimada dhijitaalka ah - kaliya 51% ganacsiyada waxay yiraahdaan ururkoodu wuxuu wax kaqabtaa baahiyaha isticmaalaha gaarka ah ee dhammaan meheradaha
Hayso maskax dhaxal gal ah oo abuureysa caqabado isbadalka dhijitaalka ah - 76% ganacsiyada waxay yiraahdaan waaxdooda waxay la tartameysaa waaxaha kale ee ururkooda ilaha iyo / ama miisaaniyada.
Ku shaqee nidaamyo duugoobay oo caqabad ku ah awoodda lagu horumarin karo khibradaha dhijitaalka ah - 84% waxay yiraahdaan ururkoodu wuxuu leeyahay nidaamyo dhaxal gal ah oo saameyn ku leh xawaaraha horumarka khibradaha cusub ee dhijitaalka ah
Kuwani waa hanjabaadaha ururkaaga maadaama aad rajeyneyso inaad wax ka beddesho suuqgeyntaada dijitaalka ah. Waxaan gobolka ku haynaa tafaariiqle weyn oo doonayay in laga caawiyo suuq geynta dijitaalkooda. Waxaan aragnay fursad aan caadi aheyn oo ay ku hirgelinayaan nidaam ganacsi oo cusub kaas oo lagu dhex daray barta iibkooda. Si kastaba ha noqotee, hoggaanka ayaa ku xanibay kharashka iyaga oo dhisay badeecad lahaansho iyo nidaamka iibka oo ay ku waayeen tobannaan milyan oo doolar sannadihii la soo dhaafay. Waxay yiraahdeen maalgashi kasta oo ku saabsan barta cusub ee iibka, agabka, iyo nidaamka fulinta waa laga baxay wadahadalka.
Natiijadu waxay noqotay inaysan jirin wax is waafajin ama is dhexgal u dhexeeya iibka khadka tooska ah iyo kan tooska ah. Waxaan ka tagnay rajadan ka dib shirar badan oo rajo leh - ma jirin si kaliya oo aan ku gaari karno natiijooyinka kobaca ee ay rajeynayeen iyadoo la tixgelinayo nidaamyadooda 'xaddidnaanta daran. Shaki aad u yar ayaan ka qabaa in tani ay ahayd qayb weyn oo ka mid ah halgankoodii - haddana waxay u xareeyeen musalafnimo ka dib markay daawadeen ganacsigooda oo hoos u dhacay sannadihii la soo dhaafay.
Safarka Suuq-geynta Agile
Haddii meheraddaadu rajaynayso inay la qabsato oo ay ka gudubto caqabadahaas, waa inaad korsataa suuq-galka agile hawsha. Tani war maahan, waan wadaagaynay hababka suuq geynta muddo dhawr sano ah hadda. Laakiin markii sanad kastaa dhaafto, saamaynta habka suuq-geynta aan la-beddeli karin ayaa sii wiiqaysa ganacsiyada si aad iyo aad u badan. Ma noqon doonto waqti dheer ka hor inta aan ganacsigaagu khusayn.
Muujiyeyaasha Waxqabadka Muhiimka ah waxay ku ballaadhiyeen ganacsiga dhijitaalka ah, oo ay ku jiraan wacyigelinta, ka qaybqaadashada, maamulka, beddelaadda, haynta, kor u qaadista, iyo khibradda. Qormadeena ugu dambeysa, waxaan ku qaabeynay safarka aan macaamiisheenna ugu sii maraynno si aan u xaqiijino guushooda. Marxaladaha Safarkeena Agile Suuqgeynta waxaa ka mid ah:
Maskaxda ku hay in tani tahay safarka guud, ee uusan ahayn hage xeeladeed oo lagu fulinayo laguna fulinayo suuq-galka agile xeelado. Hal ilo oo faahfaahsan ayaa ah ConversionXL Sida Loogu Dhaqan Geliyo Dhirta Suuqgeynta.
Waxaan kaliya dooneynay inaan muujinno xiriirka ka dhexeeya wejiyadaha aasaasiga ah ee safarkaaga iyo waxyaabaha ay tahay in la baaro markaad ku dhex socoto cirifka suuqgeynta dhijitaalka ah. Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysan doonto macluumaadkan sida aan ugu raaxeysanay ka shaqeynta bishii ugu dambeysay! Waa aasaaska mid kasta oo ka mid ah hawlgalkeena macmiil.
Waxaan sidoo kale soosaaray Xaashida Waxqabadka Suuqgeynta inay kaa caawiso inaad qorsheyso dadaalkaaga suuqgeynta isla markaana aad u xaqiijiso la jaanqaadida yoolalkaaga guud ee shirkadaha.
Soo Degso Xaashida Hal-abuurka Suuqgeynta
U hubso inaad gujiso nooc buuxa haddii aad dhibaato ku qabtid akhrintiisa!
Tags: suuq-galka agilesafarka suuq geyntamoodeelka suuq geyntahabka agile marketingxujowacyigadiintaIsbadal digital ahdaahfurkahawlgelintafulintawaayo-aragnimofulintasafarkahabka suuqgeyntaqaabka suuq geyntamodelHagaajintageedi socodkahayntaistaraatijiyadisbadalmurugo
Waxaan Ka Fariistay Sannad Shirarka, Waar Maxaa Dhacay